Chiratidzo chadanieri chechipiri chechikara chinowedzera tsanangudzo dzechiratidzo chemuhedeni.
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Chiratidzo chadanieri chechipiri chechikara chinowedzera tsanangudzo dzechiratidzo chemuhedeni.
Chiratidzo chadanieri chechipiri chechikara chinowedzera tsanangudzo dzechiratidzo chemuhedeni.
Chiratidzo chaDanieri chechipiri chechikara chinotipa muono mukuru unotsanangura chiratidzo chake chekutanga chemuHedeni.
Danieri 7:2 Danieri akataura, akati: Ndakaona pane zvandakaratidzwa vusiku, tarirai mhepo ina dzokudenga dzakamutsa gungwa guru.
Mhepo inoreva hondo nematambudziko. Ichi ndicho chimiro chenyika nekuda kwekutsamwa uye chido chenyika dzedu chekupamba uye kutsikirira dzimwe nyika. Chido chemunhu mumwechete chekutsikirira nekudzvanyirira vamwe. "Denga" chiyero chemweya. Saka chiratidzo ichi chinoratidza hondo dzemweya dzagara dziripo pakati pemarudzi. Hondo dzemweya idzi dzinoitika kusi kwemeso kwatisingakwanisi kuona. Tinozongoona zviratidzo zveshanduko dzinozotiwira.
Mweya wakaipa unokurudzira nyika dzevahedheni kuti dzive nechido chekurwira masimba.
Danieri 7:3 Mhuka huru ina dzikakwira dzichibuda mugungwa, dzisina kufanana.
Gungwa rinomiririra vanhu vazhinji vasina kugadzikika vanotsvairwa vachiteverana nemhepo dzemapfekero, maonero uye tsika.
Danieri akatanga kuona hushe huna uhu Babironi, Persia, Girisi ne Roma semufananidzo wemunhu. Babironi yaive musoro wendarama, Persia maoko nechipfuva zvesirveri, Greece dumbu nechiuno chacho zvaive zvendarira kwozoita Roma yaive pamakumbo maviri edare. Vutare hwakaomarara asi hunozorasikirwa nehukoshi hwahwo. Izvi zvinotsanangura isu maHedheni, makaro uye zvose zvatinotsungirira mazviri, maitiro edu anova akaipa torasikirwa nechiremerera chinodiwa pahunhu hwevanhu.
Pachiratidzo chechipiri ichi, Danieri akaona hushe humwechete huna uhu sezvikara zvine huturu uye zvinotyisa. Izvi zvinotsanangura mweya wakaipa nekushandisa hondo kunoita hushe hwemahedheni hwese. Maitiro echikara nyoka akatangira nekuziviswa kuvanhu mumunda weEdeni kupfurikidza naEva. Kaini aive mhondi akauraya mukoma wake Abero akavazve munhu wekutanga munhoroondo akaedza kunyepera Mwari. "Ndiri mufudzi wemunun'una wangu here?" Kuedza kutaura kuti haaiziva kuti munun'una wake aive kupi.
Zvino Danieri akaona kukarira kuda kuuraya uye kuda kupamba zviri ndizvo zvinokurudzira nyika dzemahedheni.
Danieri 7:4 Yokutanga yakanga yakafanana neshumba, inamapapiro egondo; ndikaramba ndakatarira kusvikira mapapiro ayo atavurwa, ikasimudzwa ichibva panyika, ikamiswa nemakumbo maviri somunhu, ikapiwa moyo wemunhu.
Hushe hwekutanga hwaive Babironi yaive iri pakati penzizi Ephrate ne Tigris. Iyi inzvimbo inova Iraq nhasi uno. Nyanza ye Mediterian ne Persian galf zvinoratidzwa neruvara rweblue pamepu. Miganhu yenyika ye Babironi inoratidzwa neruvara rwutsvuku.
Shumba ndiyo ishe wezvikara, Nebuchadnezzeri aive ishe wehondo ane simba, aipamba nyika nenzvimbo dzakatenderedza Babironi iyo yaakavaka rikava guta gurusa pasi rose uye nzvimbo huru yezvekutengeserana. Isu mahedheni tinonyengerwa nepfungwa yekuti simba, chiremerera, hupfumi uye kuva nezvivakwa zvikuru zvinoyevedza ndizvo zvinotaura kuti tiri kurarama.
Babironi yaitsanangurwa seshumba yendarama ine hukasha kwazvo.
Mapapiro anotendera shiri kubhururuka. Gondo ndiro mambo weshiri zvakare rinobhururukira mudenga-denga kukunda dzimwe shiri dzose. Sezvinoita mambo wezvematongerwo enyika pasi pano. (Shumba) yaionekwa zvekare semufananidzo wemupurisita mukuru wemaPegani kana Pontiff wemumhepo (gondo) sezvo aikwanisa kuenda kudenga kunoona Mwari. Izvi zvose zvaisanganiswa pamunhu mumwe, kuva mambo mukurwira zvematongerwo enyika, kana mutungamiriri wenyika uye mupurisita mukuru panezvemweya kana Pontiff wevanhu vari muchitendero (nhasi uno chatinoti kereke).
Ndiwo mweya weBabironi unobatanidza kereke nematongerwo enyika.
Munhu mumwe Nebuchadnezzeri aive mambo uye muprista mukuru. Munhu mumwechete anotonga vanhu pane zvematongerwo enyika achivaudza kuti vorarama sei uyezve kuvatonga pamweya nekuvaudza kuti votenda mune zvipi.
Iyi iyambiro kune masangano anoparidza shoko achizvisanganisa munezvematongerwo enyika.
Sezvo aya ari maitiro eBabironi tinoona kuti Babironi inopikisana nechokwadi.
Mumagwaro Testamente Tsaru Mwari haaitendera kuti mambo aite mabasa aiitwa nemupurisita mukuru. Kereke nenyika hazvifanirwi kusanganiswa. Mapapiro pashumba haasi akagara aripo. Saka iyi inzira yaida kushandiswa kubatanidza simba rekutonga muchitendero uye munyika pamunhu mumwechete.
Ngatitarisei mureza weItaly yekare . Unoratidza shumba ine mapapiro irine bakatwa nemupeni (kuti iuraye) neharo inova yakanaka.
Izvi zvinomiririra muurayi mutsvene. Mhondi yechitendero. Fungai nezvema "Kristu" akakurudzirwa nemaPope kunoita makurusedhi . Vakanouraya, kuparadza nekubata chibharo nezita raMwari. Zvizhinji zvakaitika zvaive zvakaipa sake nhorondo yemakurusedhi haitsananguriki. Popewo aiti yaive iri nzira chaiyo yeruponeso. Vazhinji vaiisa michinjikwa mitsvuku panhowo dzavo (muchinjikwa mutsuku uripo zvekare pamureza) zvakare vose vaiisa muchinjikwa mutsvuku pachidziviriro chavaiisa pazvipfuva zvavo. Kunyangwe zvakadaro muchinjikwa mutsvuku uyu hawaikwanisa kuviga kuipa kwaive mukati memoyo yavo Makurusedha aya aingove majihadists muchitendero. Vachiuraya nezita raMwari vachisvibisa zita rechitendero.
Izvi zvakabatsirawo maMoslem, magandanga, majihadists anhasi. Vanofunga kuti kuuraya inzira yeruponeso.
Tikatarisa pabheji ra Pope John 23 (akatonga kubva gore ra 1410-1415 AD) raive zvekare neshumba ine mapapiro.
Sake vakabvumira vega shumba ine mapapiro yechitendero cheBabironi chekukanganisa kuti iwane nzira yayo yekupinda multaly uye kumaPope nhasi uno tinoziva kuti yave kupi.
Apo maHeburu matatu akaramba kupfugama kuti anamate chifananidzo, Nebuchadnezzari akaedza kuvauraya mugomba remoto, apo Danieri akanamata kuna Mwari pachinzvimbo chaNebuchadnezzari, veku Babironi vakaedza kumuuraya mugomba reshumba.
Saka kuroverwa muchitendero kweavo vanoramba kutevera nzira yekutenda kune zvinodiwa kuBabironi
kwakatangira ikoko, kuBabironi. Kumanikidza vanhu kuti vanamate nekukudza kukanganisa pachinzvimbo pechokwadi. Nebuchadnezzari mambo wenyika aionekwa senhume yaitaura naMwari akamiririra vanhu vake. Mapapiro egondo aimiririra kukwanisa kwake kuenda pamusorosoro pane zvemweya semupurisita mukuru kana kuti Pontiff uye aikwanisa kuenda kudenga kunosangana nevamwari vavo ozodzoka panyika kuvanhu kuzovaudza hurongwa hwamwari. Izvi ndizvo zvimwe zvaive zvakavanzika zveBabironi zvekuti mambo wezvematongerwo enyika ndiye mambo zvekare kune zvechitendero chenyika.
Saka vatendi vanofanirwa kutenda zvakare kuti faifanirwa kuva nemunhu mutsvene uyu akakwiridzirwa aizova mumiririri wavo kuna Mwari.
Pamweya aikwanisa kubhururuka kuenda kudenga-denga ndiye aiziva hurongwa hwaMwari. Hakuna mumwe aikwanisa kuenda pedyo naMwari. Uhu ndihwo hwaive hwaro hwechitendero kuBabironi. Kuzvipa kwako kumunhu anodiwa kuti ave pakati pako naMwari . Aive zvakare ishe, shumba aiisa mitemo yake nekuda kwake pamusoro penyika. Aya ndiwo aive maitiro emweya weBabironi. Simba rechidzvanyiriri rakasevenzeswa pavanhu pane zvematongerwo enyika uye zvechinamato kuti vave varanda kumunhu mumwechete. Fungai nezvaPope nanhasi vachiri kumuti Pontiff mutungamiri wechitendero akazadzwa nezvematongerwo enyika.
Saka Danieri ari kuronda kuti zvakavanzika zveBabironi zvakasvika sei kuRoma zvikazoguma zvave muRoman Catholic church, iyo inonzi Babironi yakavanzika na Saint Jonh mubhuku ra Zvakazarurwa.Nebuchadnezzari aive akazadzwa nekuzvikudza nekuzvida. "Haisi here Babironi yandakazvivakira" Venhoroondo vanoti akapeta kaviri zvivakwa kuvaka kupinda zvivakwa zvakasimudzwa nemamwe madzimambo ose munhorondo yenguva yekare. Kuita zvidhinha zvaipiswa nezuva ndiro raive basa ravaiziva zvikuru kuBabironi nekuti vaive vasina matombo avaikwanisa kushandisa kuvaka . Isu mahedheni hatiite kuzvikudza kumwechete uku here kana tichinge tabudirira? Tinobva tafunga kuti tinoshamisa.
Asi Mwari akabva adzingira Nebuchadnezzari kusango uyo akararama kunge chikara. Aya aive mamiriro chaiwo ehushe hwakaipa. Anotsanangurwa semusoro wechiratidzo chakaonekwa naDanieri pakutanga. Saka kutsamwa kwake kwaanoitira avo vose vanoramba kumuteerera kwakakura kunoita kuti ade kuuraya vese vasingaite sekuda kwake. Muviri, unova vanhu waifanirwa kuteerera musoro, Nebuchadnezzari aive mudzvanyiriri. Aitora mvumo nechisimba yekutonga vanhu achivamanikidza kuti vamuteerere kana kuti aizoita zvimwe navo. Maitiro echikara aya akafambawo nemuma Persian, maGiriki uye maRoma achizopedzisira ave mukereke yeRoman Catholic iyo yakamuka kubva mumatongo ehushe hwe Roma. Muviri unotongwa nemifungo inobva mumusoro.
Makore manomwe akapfuura, chiratidzo chemweya wesango une huturu hwemahedheni asina kuwana ruponeso vachave vakatendeka kuhudzvanyiriri hwehushe hweRoma nekereke yeRoman Catholic mukati memakereke manomwe neapo vatendi vemuBhaibheri vaiuraiwa vachiitirwa hutsinye. Saka mwari akabva abvisa mapapiro ake. Nebuchadnezzari aive asisazvione semupurisiti mukuru mumiririri wevanhu kuna Mwari. Aingovewo munhu akatenderwa na Mwari kuti ave mambo. Izvi zvaive zvisingamuiti kuti ave pamusoro pevamwe vanhu vose pamweya. Simba rake nekubudirira kwake kwakangokwanisa chete kumuita akaipa.
Panguva yese nezvaaiita aingovewo mutadzi aitoda nyasha dzaMwari kuti adzikinurwe. Izvi zvakaita kuti ave akafanana nevamwe vanhu vose. Pamaonero emweya kuna Mwari hakuna munhu ari pamusoro peumwe zvisinei nechigaro kana pfuma yaanayo. Nekuti hatina mapapiro anokwanisa kutiisa mudenga kukunda vamwe. Zvinodiwa na Mwari kwatiri magiriki ndezvekuti tigadzirire kuuya kwa Mwari kwechipiri atisvikire tiri vatsvene pakupera kwemakereke manomwe.
Danieri 7:5 Ndikaonazve imwe mhuka yechipiri, yakafanana nebere, iyo yakanga yakasimudza rumwe rutivi rwayo. Vuye mumuromo mayo yakanga yakaruma mbabvu nhatu pakati pameno ayo, vakati kwairi; Simuka, upedze nyama zhinji.
Kusimudzwa rutivi rumwe, bendekete rimwe rinova pamusoro perimwe. MaMedes akasimuka kuva pakutonga nokutanga. Cyrus, mambo wehushe hudiki hwePesia (inoratidzwa neruvara ruchena pamepu inotevera) aive muzukuru wamambo wema Median. Zvino maPesians akabva apamba maMedian vari pasi pamambo wavo Great Cyrus Asi vakabva vava netsitsi vakatora maMedes sevabatsiri pamubatanidzwa. Asi maPesians ndiwo aive nesimba pamubatanidzwa pakutonga hushe hwema Median. Pakupedzisira Pesia yakazotora nzvimbo yese ine ruvara rwe brown pamepu inotevera. Rakarara nerutivi rumwe, bere rinokwanisa kurwisa rutivi rumwechete ruri kumberi kwaro. Saka kana raive rakarara nerutivi rwekuchamhembe rwakadziva kumaodzanyemba, musoro waro uri kuchamhembe. (Great Bear mubatanidzwa wenyenyedzi dzinowanikwa kuchamhembe kwematenga patinowana shoko rekuti "Acttic") saka rinozosimudzwa kurutivi rumwe musana waro uri kumabudazuva, saka Danieri aizoriona richirwisa zvikuru kumadokero nekumawodzanyemba richipinda mu Egipita. Mbabvu nhatu dzaive mumuromo maro dzinomiririra nyika nhatu dzakakosha dzakapambwa. Nekuda kwei dzaingova nhatu chete? Cyrus akapamba nyika zhinji paaigadzira hushe hwake hwepasi rese hwekutanga. Akapamba kusvika kumabudazuva kumiganhu yelndia. Asi Danieri haana kutarisa zvese izvi nekuti bere rakange rakarara rakafuratira, musana waro uri kumabudazuva.
Danieri aive asina basa nekuti hushe hwePesia hwaive hwakakura sei. Aive akanangana nenyika dzaizoshandiswa kukurudzira zvakavanzika zveBabironi. Zvakavanzika zveBabironi izvi zvaizonyengera nekutadzisa makristu mukati mekufamba kwenguva tiri mumakereke manomwe. Zvazvaive vavengi vechokwadi vekare saka Danieri aitevera kubudirira kwazvo. Nekuti tinofanirwa kuziva zvose pamusoro pemuvengi wedu.
Apo Babironi yakakundwa nehondo yaDarius muMedian mugore 536 BC, Pontiff kana kuti mupurisita mukuru wezvakavanzika zveBabironi, akabva atiza nepfuma yake yese, akananga kumadokero. MaMedian nema Pesians vaive kumabvazuva kweBabironi, saka zvaive zvisina maturo kuti aende kumabvazuva. Chitendero chakagara chiri basa raiunganidzira vatungamiri vacho mari nesimba pamusoro peavo vanovatevera. Saka Pontiff aive ave kuda kutsvaga guta idzva rekuti aite pfuma uye ashumire basa rake ari. Amboti tendererei akazozviwanira nzvimbo mukaguta kadiki, Pegamosi (iro rainzi Pegamum) raive muAsia Minor. Asia Minor yaive nyika yakapfuma kwazvo. Rimwe guta raive pedyo rainzi Sardis rakazova nzvimbo yePersia yekutora goridhe kumadokero. Nzira dzekutengeserana dzaipfuura nemuAsia Minor saka wakabva wava mukana mukuru wekubudirira. Hupfumi nesimba panezvematongerwo enyika zvaidiwa naPontiff kuti akudze bato rake. Asi Pegamosi yaizofanirwa kugara isina kuonekwa kwemakore 200 ekutonga kwe Persia. Zvino Alexander muGiriki akabva apamba Persia akabva afa pasina nguva refu. Makore makumi maviri ekurwa kwakaoma kwakava nevakuru vana vemaGiriki vaivaka hushe. Mugore 301 BC mukuru wemauto Lysimachus akatora nyika yaive yakatenderedza Pegamosi iyo yaizivikanwa nekunzi hushe hwe Thrace. Guta rePegamosi rakatanga kukura rikava guta rakaisvonaka. Saka hushe hwe Thrace hwakabva hwadonha, nekukasika Pegamosi ikabva yasimuka kunopamba nzvimbo dzaive dzakatenderedza mu Asia Minor. Vana nevazukuru vaPontiff vakabva vasimukawo vakatora mukana wekuva mapurisita makuru ehushe hwaisimuka hwePegamos kubva muna 281BC. Vakatanga namambo wavo Attalus 1.
Saka mbabvu yekutanga yaimiririra Babironi nenyika dzayo dzaive dzakaipoteredza hushe hweBabironi. Ndiko kwaive kwatangira zvakavanzika zveBabironi. Imwe mbabvu yaimiririra Pegamosi nenzvimbo dzayo dzakaitenderedza muhushe hwayo dzakaita seLydia (ndiko kwaive kwave kudaidzwa kweAsia Minor kumazuva iwayo) ndiko kwaive kwakahwandira zvakavanzika zveBabironi mumazuva ehushe hwePesia vasati vatanga kukura pasi pehushe hwemaGiriki apo Pegamosi yakakura kuva guta ikazova pakati uye guta guru rehushe hwe Pegamosi.
Kubva Babironi kuenda Pegamosi ndiyo nzira yakatorwa nezvakavanzika zveBabironi.
Cyrus akapamba nyika idzi dzose.
Ko mbabvu yetatu yaimiririrei?
Campuses mwana waCyrus wekuPesia, akazopamba Egipita akazofa ari munzira kudzoka kuPesia. Saka Egipita ndiyo yakazova mbabvu yetatu. Kutenda kuzhinji kwechipegani kwevanhu veku Egipita nekunamata kwavo zvifananidzo kwaive kwapararira kwakazobatanidzwa nezvakavanzika zveBabironi, ukava mubatanidzwa mukuru wehungwaru hwe chipegani cheBabironi uye maEgipita. Nenzira imwe muTestamente Yekare, Isiraeri yaive yakaiswa pakati peBabironi (kukanganisa muchitendero) kuchamhembe neEgipita (kutevera zvenyika) kumawodzanyemba saka maJuda vaifanirwa kuedza nepavaigona kusazvisanganisa mukurudziro mbiri idzi dzose. MaKristu nhasi uno arikuonekwazve ari pakati pekuresva kwemasangano uye achikwezverwa kune zvenyika.
Zvakavanzika zveBabironi zvizhinji zvakarukaniswa netsika dzechipegani dzekuEgipita. Egipita ne Babironi ndidzo nyika mbiri dzekutanga kubudirira kunyika dzekuMiddle East saka tsika zhinji dzechipegani dzakatorwa nevanhu vekuBabironi. Mugore ra 274 AD mambo weRoma Aurelian akatorawo kuita kweEgipita kwekunamata mwari wezuva akakuwedzera pazvakavanzika zveBabironi nekuita 25 Zvita zuva rekuzvarwa kwamwari wavo wezuva (sun god) nekuti yaive nguva yepakati penguva yechando apo zuva rinotanga kudziya.
Kumakore akapoteredza 350 AD Pope akatorawo zuva iri 25 Zvita akariita zuva rekuzvarwa kweMwanakomana waMwari (Son of God ) iro rakazozivikanwa nekunzi Kisimusi (Christ's mass) nhasi uno rinonzi "Christmas" Kisimusi.
MaEgipita vaitendawo kuti mwari wavo aive Tiriniti (trinity) Isis, Horus naSeb. Matemberi avo ane jira paaritari rine mavara matatu ekutanga pariri IHS. Pfungwa iyi yakatorwa nevekuBabironi nanhasi uno ichiriko tinoiwana kuMethodist Church .Kunamata mwari wezuva kweEgipita kwaimiririrwa nechinenge chingwa chaive chedenderedzwa raimiririra zuva. Mupurisita aiisa izvi mumuromo mevanhu. Chingwa ichi vaisachigura. Chingwa ichi chakapindawo mutsika yeBabironi nanhasi chingwa chakaita denderedzwa chisina kugurwa chichiri kupihwa vanhu vanoenda kuma "mass" eRoman Catholic neve Anglican pachidyo chavanoita. Masangano aya vanasikana vekereke yeRoman Catholic.
Jesu akagura chingwa chaakashandisa pachidyo chaakapa pachirairo chekupedzisira.
KuEgipita vaishandisa obelisk, dombo rakareba raive nekumusoro kwakatesva, sechimwe chikamu chavo chekunamata mwari wezuva sezvo rainongedzera kudenga roita sekuti raizosvikira zuva. Nhasi uno dombo huru reoberisiki rakamiswa paSt Peters square muguta reVatican yeRoman Catholic Church semuyeuchidzo wekubatawo kwavo pazvakavanzika zveBabironi.
Saka Egipita semukurudziri pazvakavanzika zveBabironi, yakazova mbabvu yechitatu.
Danieri 7:6 Shure kwaizvozvo ndakatarira, ndikaona mhuka imwezve, yakafanana nengwe yakanga iine mapapiro mana pamusana wayo akafanana neeshiri, mhuka iyi yakanga iine misoro minawo, ikapiwa simba.
MaGiriki akakwanisa kutapa Pesia nekuratidzira kwehondo yaive nekukasika kwakaita semheni yakatora makore masere. Ingwe imhuka inomhanya zvikuru. Alexander paakafa vaimuteverera vakarwa kwemakore makumi maviri vasati vagovana zvaive zvasara pahushe uhu vakabva vazvipatsanura kuti zvive hushe huna kuti hushe huna vakapa vatevereri vana vaive vasara. Cassander akatora Greece, Ptolemy akatora Egipita naCeleucus akatorawo Syria nezvaive zvasaririra kuhushe hwekumabvazuva. Chikamu chidikidiki, chainzi hushe hweThrace chakaenda kuna Lysimachus akazouraiwa naSeleucus. Asi Lysimachus akazotonga zvimwe zvikamu zviri muAsia Minor zvaisanganisa Pegamosi uko zvakavanzika zveBabironi zvairarira kuti zvigotsotsonya imwe yenguva. Pamaonero aDanieri, Lysimachus aive nechikamu chakakosha zvikuru chehushe hwaAlexander.
Zvakazarurwa 2:12 Nyorera mutumwa wekereke iri paPegamo uti zvanzi naiye une munondo, unopinza, unocheka kwose;
13 Ndinoziva paunogara, ndipo pane chigaro cheushe chaSatani. Wakabatisisa zita rangu, ukasaramba kutenda kwangu, kunyangwe napamazuva aAntipasi chapupu changu, munhu wangu akatendeka wakaurawa pakati penyu, apo panogara Satani.
"Chigaro chaSatani " Zvakavanzika zveBabironi zvaikurudzirwa naSatani sezvo vaive vakamugadza hushe mumoyo yevanhu. Vaipikisana nechokwadi. Vakaipa zvikuru uye vachadzikisira kutenda kwevazhinji.
Antipas mubatanidzwa wa “anti" na "pappas" (father) apo patinowana zita rekuti Pope. Saka Antipasi aive anti Pope. Saka akaurairwa kutenda kwake. Hakuna ainyatsoziva kuti aiva ani. Pamaonero evanhu aingovewo mupikisi wemaPope aisazivikanwa kuti akabva nepi. Asi Mwari akachengeta zita rake akarinyora muBhuku reHupenyu. Zvinova zvakakosha kupinda mbiri yekupiwa nevanhu.
Zvakazarurwa 2:15 Nokudaro unavamwe wo vanobatisisa saizvozvo dzidziso yavaNikoraiti.
Nico zvinoreva kutapa. (Kutapa vanhu vari mukereke.)
Sei? Nekukwidziridza munhu mutsvene mukereke pamusoro peungano iyo ichazova vatapwa kuzvido zvemunhu uyu. Izvi zvinodzosa chiprista chemunhu anenge ari pamweya pamusoro pevamwe vose. (Kushandisa mapapiro egunguwo kuti vabhururuke pamusoro vose) zvekuti panova nemutungamiriri wenyama ova pakati pevanhu naMwari mukereke.
Mwari akavenga izvi. Hapafanirwi kuva nemunhu pakati pako naMwari. Hapatombova kana nemunhu pakati pako naMwari kana wakamugamuchira akapinda mukati memoyo wako. Zvino zvose zvinozova pakati pako naMwari.
Ukarongazve izwi rekuti ITALY neimwe nzira unobuditsa shoko rekuti LAITY (sangano) Mapegani ekuRoma akapamba Italy zvino Pope akapamba "Laity" sangano, vanhu vari mukereke.
Pope anokwanisa kunyatsodzoreredza makereke kana imwe neimwe ichitongwa nemupurisita. Saka vanozongoudza muprista zvekuita zvino muprista anozova nesimba pamusoro pevanhu ovaita kuti vazadzise zvido zvaPope.
Masangano akapanduka akazvitorawo asi ivo vakazoisa "pastor " mufundisi kuti adzore nekutonga sangano rega rega. Izwi rekuti "pastor" mufudzi rakataurwa kamwechete muTestamente Itsva. Kuna Vaefeso rakataurwa pechina pahushumiri hushanu.
Saka mufudzi "pastor " haana mvumo muBhaibheri kuti atonge kereke.
Vaefeso 4:11 Zvino wakapa vamwe kuti vave vaapostora, vamwe vaprofita, vamwe vaevangeri, vamwe vafudzi navadzidzisi.
MuTestamente Yekare Jeremiah akataura shoko rekuti mufudzi kasere. Pamavhesi matanhatu acho mufudzi aitoshoropodzwa.
1 Vakorente 12:28 Mwari wakaisa vamwe pakereke, pakutanga vaapostora, rwechipiri maprofita rwechitatu vadzidzisi, tevere vaiti vemabasa esimba tevere zvipo zvekuporesa navabatsiri, navabati namarudzi mazhinji endimi.
Pakupa mabasa mukereke Pauro haana kana kutaura mufudzi.
Vanhu vanoti (pastor) mufudzi mukuru wekereke, hakuna gwaro rinodaro. Kungori kungofunga nekugadzira kwevanhu nechinyakare chavakagara vachiziva.
Kumabvirazuva, muPesia, mambo wavo ainamatwa kuitwa mwari. Izvi hazvina kuitwa kumadokero. Apo Alexander akapamba Persia maPersians akatanga kumunamata kumuita mwari. Izvi zvakanyanya kuzozadziswa kumabvirazuva apo akapfuura nekuBabironi uko kwaakabva afa. Saka ndiye mambo wekumadokero wekutanga kunamatwa asi izvi zvakaitikira kumabvirazuva. Apo vatungamiri vana vemaGiriki vakagovana hushe hwake, vakabva vatorawo maitiro ake vakazviita vanamwari mutsika yakanga yasiiwa naAlexander. Saka mutungamiri mumwe nemumwe akabva ava muyananisi wehushe hwake nedenga.
Izvi zvaimiririrwa nemapapiro mana aizokwidza madzishe aya kudenga.
Asi aive mapapiro emakunguwo, kwete egondo. Saka hwaro hwanamwari vevanhu hwaive husisina kunaka zvachose. Mumwe nemumwe akava mwari pano pasi, asi mumiganhu yehushe hwavo chete. Zvakare paive nevamwe vamwari vatatu vaipikisa. Saka vanamwari vana ava havana kuzova nechiremera sechakava neumwechete, Alexander, akange akunda vese vari vana.
Varume vana ava vakabva vaunza nekuzivisa nyika dzekumadokero kunamata munhu samwari. Izvi zvose zvaive chikamu chezvakavanzika zveBabironi.
Zvakavanzika zveBabironi zvakararama muPegamo asi zvaida mubatsiri akasimba kuti zvirarame pasi rose. Saka mugore 133 BC Attalus 111 aive Pontiff namambo wePegamo, paakanyora wiri yake akapa hushe hwake kuRoma.
Aive asina mugari wenhaka yake asi aive akapfuma kwazvo. (Sevakuru vezvitendero vazhinji vanhasi) aiziva kuti kwaizova nehondo munyika make vanhu vake vachirwa pachavo pashure perufu rwake, vachirwira pfuma yake. Kudzivirira izvi zvose, akasiira Roma hushe hwake. Akafungira chaizvo kuti Roma ndiyo yaizova hushe hwaizosimuka sezvo yaive yakurira maCarthaginian kumusoro kweAfrica nemaGiriki. Hupfumi hweAsia Minor hwakazotorwa neRome apo vakanga vatora Pegamosi, zvaive nechekuita nehuwori hwakanga hwazadza vanhu veRoma. Mugore 63 BC Julius Caesar akatenga nzira yake yekuva Pontiff wezvakavanzika zveBabironi.
Akabva atora mauto kuti anopamba Gaul (France) kuti awane mari yekubhadhara zvikwereti zvake. Apo aisimuka kuva nemasimba makuru muRoma, nekukudzwawo kwezvakavanzika zveBabironi kwakasimukawo naye. Pasina nguva refu akava nesimba kwazvo pasi rese. Zvakavanzika zveBabironi zvakabva zvawana mubatsiri akasimba kwazvo.
Danieri 7:7 Shure kwaizvozvo ndakaona pane zvandakaratidzwa husiku, ndikaona mhuka yechina, yaityisa nekuvhundutsa, ine simba guru kwazvo yaive nameno makuru ovutare ikapedza nekuvhuna, nekupwanya zvakanga zvasara netsoka dzayo, iyi yakanga yakasiyana nemhuka dzose dzakaitangira, yaive ine nyanga gumi.
Chikara ichi chairasisa. Chaisatarisika sedzimwe mhuka dzese dzatinoziva. Dare remakumbo echiratidzo chemuGiriki raive roratidzwa pamazino makuru echikara.
Hushe hweRoma hwaikwanisa Kuparadza vavengi vahwo vose.
Mukuru weRoma mumwe nemumwe aizodaidzwa kuti Pontiff. Izvi zvakazopera mugore 379 AD apo mutungamiri mutsva akagadzwa kumabvazuva ainzi Theodosius akati, ini ndinoramba zita iri. Paakafa muna 395 AD akasiya apatsanura hushe hwake muzvikamu zviviri zvichimiririrwa nemakumbo maviri emufananidzo wechiratidzo chaDanieri chemuGiriki.
Chikara ichi chaimiririra chikamu chekumadokero chehushe hweRoma pazvikamu zviviri zvakapatsanurwa. Nekuti ndiko kwakagumira chipegani nezvakavanzika zveBabironi pavakasvika kuRoma.
Mugore 450 AD Pope Leo akatorazve zita rekuti Pontiff achiti rakabatsira pakusimuka kwehushe nekukudzwa kwavo pakati pemarudzi emaBabarian.
Muna 452 AD akakurudzira Attila muHun kuti asarwise Roma. Nzara nehurwere zvaive munyika dzaive dzakasaririra ndizvo chete zvakaita kuti Attlas asarwise Roma. Zvisinei izvi zvakaita kuti Pope akudzwe mumaziso evanhu. Pontiff, aive muprista mukuru wechipegani nezvakavanzika zveBabironi naizvozvo akafadza maBabarian vaive nechinyakare.
Danieri 7:7 Shure kwaizvozvo ndakaona panezvandakaratidzwa usiku ndikaona mhuka yechina yaityisa nekuhvundutsa, ine simba guru kwazvo, yakanga ina meno makuru evutare, ikapedza nekuvhuna vhuna nekupwanya zvakanga zvasara netsoka dzayo; iyi yakange yakasiyana nedzimwe dzose dzakaitangira, yakanga ine nyanga gumi.
Nei Roma yaive yakasiyana nehumwe hushe hutatu uhu?
Humwe hushe uhu hwaiparara kana hwarwiswa nehumwe hune simba guru. Roma nerumwe rutivi yaisakundwa nedzimwe hondo dzakasimba asi nezvikwata zvemarudzi emaBabarian aive nehutsinye kwazvo. Saka pakawa hushe hweRoma hukaparara, ipapo simba reRoma rakashanduka kubva pakuva nyika asi mweya wayo ukava kereke yakavakwa pahwaro hwechitendero chechipegani. Saka sekereke Roma yakapamba vapambi vayo maBabarian, yakakwanisa kubvisa dzimwe nyika nhatu idzi ikapandutsa mamwe marudzi mazhinji kuti vave maCatholic. Roman Catholic yakasimuka kuve sangano rakasimba. Asi tsika dzayo dzechipegani dzakaita kuti vave nezvavanotenda zvaivasudurudza kuBhaibheri.
Danieri 7:7 Shure kwaizvozvo ndakaona pane zvandakaratidzwa vusiku, ndikavona mhuka yechina yaityisa nokuvhundutsa, ine simba guru kwazvo yakanga ine meno evutare ikapedza nekuvhuna vhuna nokupwanya zvakange zvasara netsoka dzayo iyi yakange yakasiyana nedzimwe dzose dzakaitangira, yakange iine nyanga gumi.
Izvi zvinoti shamisei nekuti Roma yekumadokero yakaparadzwa nemarudzi anodarika gumi. Asi pachiratidzo ichi Danieri ari kutevera kuedzwa kwemweya kwezvakavanzika zveBabironi. Mumashure merufu rwaJulius Caesar, vekumabvazuva kweRoma vaive vakumunamata kuita mwari. Saka nzira yekunamata munhu yakanga yadzika midzi muRoma. Zvino mugore 29 BC muzukuru wake mukuru Augustus akazova mukuru weRoma wekutanga akazonamatwa samwari kuPegamosi achiri mupenyu. Ndipo pakapindira kunamata munhu mutsika yeRoma. Zvakavanzika zveBabironi zvakange zvodzika midzi kuRoma. Mambo wechitatu Caligula aitozvisimbisa kuti iye aive mwari. Saka kunamata munhu kwakabva kwasimba muRoma. Chikamu ichi chaizoenderera mberi kusvika kuna Pope. Madzishe nemadzimambo vaifanirwa kuzviwisira pamberi pake votsvoda tsoka dzake. Saka Danieri ainyatsotevera marudzi akakwanisa kuwisa hushe hweRoma asiwo vakabatsiridza pakuzosimuka kwekereke yeRoman Catholic. Paive nemarudzi aya gumi akabatsira pakufa nekumuka kwemweya weRoma wakafa uri nyika ukazomuka wave sangano rinozviti kereke.
Rudzi rwekutanga rwaive ndirwo rwainyanya kutyisa, vanyonganisi maHani. Vaive vakasimba vairwa vari pamabhiza. Vaimiririra murume wemunondo akataurwa kuna Zvakazarurwa 6 apo pakatsanangurwa antikristu, kereke yeRoma semudzidzisi wenhema. Saka murume wemunondo maHani ndivo vakava vekutanga kuparadza Roma asi nekusaziva, vakabatsiridza pakusimuka kwaPope. Vaibva pakati nepakati peAsia vakasairira maBabarian vaive pedyo nemiganhu yeRoma mukati menyika yeRoma. Saka ndivo vaive mudzi mukuru weshanduko.
Mugore 378 AD maHani vakatanga kusvika kumabvirazuva eRoma uko vakabatsira maGoths kuuraya mambo wekumabvirazuva Valens vakaurayazve mauto aisvika 20 000 pahondo yakaoma kwazvo kubva pahondo yavakaita nemaHani vakatanga. Izvi zvakabatsira sei kereke yeRoman Catholic? Theodosius 1 akasarudzwa kuva mutungamiri wekutsiva Valens kuConstantinople muna 379 AD akaramba zita rekuti Pontiff. Akabva aona Pope semukuru kwaari pamweya saka izvi zvakabva zvapa Pope kuzvikudza kukuru. Saka sezvo chipurisita chekuBabironi chakanga charasikirwa nemukuru wacho akanga ari mambo kuRoma, vakatenderera vachitsvaga munhu aive akasimba vakamuwana kumadokero, Pope weRoma Leo 1 akasarudzwa mugore 440 AD. Chinzvimbo chemuprista mukuru wezvakavanzika zveBabironi chakapa Leo kukudzwa kukuru pakati pemaBabarian vaive vakutoparadza hushe hwekumadokero. Mugore 452 AD Attila muHani akauya kuzorwisa Roma asi Pope Leo akasangana naye akamuti asarwise. Attila akazofa mugore rakazotevera akasiya Leo aine mbiri kwazvo uye achiremekedzwa nekuda kwekumisa hondo yemahani. Hapana imwe kereke yakazokwanisa kukwikwidza mbiri yaLeo iyi. MaHani akabva apararira kumashure kwerufu rwa Attila. Nekuuraiwa kwakaitwa mutungamiri Valens uyo aive Pontiff maHani akabva azarurira Theodosius mukova, akabva ava mutungamiri wekutanga akaramba kuve Pontiff. Murume aive nesimba muhushe hweRoma aive Pope. Saka chinzvimbo chaPontiff chakabva chapihwa Pope Leo 1 akabva awana simba rekumira kuna Attila muHani, zvakaita kuti Pope ave nembiri kwazvo.
Theodosius akakanganisa zvikuru mugore 395 AD paakafa. Akapatsanura hushe hweRoma muzvikamu zviviri kuti vana vake vaviri vaive vasina njere uye vaive vasina mufaro vagovane. Sarudzo iyi yakaita kuti Roma yekumadokero ipere simba. Yakatanga kudzikira. Yaive nemumwe mukuru wemauto aive akanaka Aetius, aishandisa hondo imwe yemaBabarian kukunda imwe hondo yemaBabarian. Nzira dzekukamura nekupamba dzakangwara.
Aetius akabatana nemaGoths kuti angokunde Attila asi haana kuparadza maHani, nekuti aikwanisa kuzoda rubatsiro rwavo pakurwisa mamwe marudzi emaBabarian. Izvi zvakaita kuti mambo wekumadokero atange kufungira achibva auraya Aetius. Mushure mezvo hushe hwekumadokero hwakava panjodzi. Saka Pope Leo akasangana naAtilla asati afa.
Kereke yeRoma nemurume ane simba saPope yakava chitsuwa chekugadzikika mugungwa rizere kupandukirana nemaBabarian, kuurayana uye kusawirirana. Vanhu vaimbopikisana nekuva maCatholic vakatanga kuuya kuzotsvaga rubatsiro rwezvekudya kubatsirwa pamweya nekuti zvose zvaive zvakavapoteredza zvaive zvoita sezvave kuvawira. Saka Pope akabva asimuka kunobatsira vanhu ava uye kufambisa zvinhu mune zvemabasa nekuti hurumende yaive isisakwanisi kupa vanhu zvavaikodzera mumabatiro ayo.
MaHani akabatsira kubvisa Valens pakutonga. Akatsiviwa naTheodosius uyo akaita humbwende hwekupatsanura hushe hwekumadokero zvakaita kuti hupere simba. Pahwakaramba huchiparara nekusaendeka, simba raPope ndipo parakasimudzwa muguta reRoma apo vakatora mapato ehurumende mazhinji. Kukwikwidza kwavo nehurumende yeRoma kwakaita kuti mamwe makereke avaremekedze uye avaise pachinzvimbo chehutungamiri mushure mekuparara kwehushe hwekumadokero.
Saka maHani akaparadza hushe hwenyika yeRoma asi vasingazivi kuti vaitosimudzira Pope vachimupa chiremerera zvikuru.
Danieri 7:8 Ndikacherekedza nyanga, ndikaona rumwe runyanga ruchibuda pakati pedzimwe, ruri ruduku, dzimwe nyanga nhatu pane dzekutanga dzikadzurwa nemidzi yadzo pamberi parwo, ndikaona kuti parunyanga urwu paive nameso emunhu, nomuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru.
MaBabarian aigadzira hushe hweRoma nekuhugura-gura. MaHaniwo akazotanga kuhugura pashure perufu rwaAttila. Rimwe rezvikwata zvavo, maHeruli vakasarudza Odoacer muBabarian samambo wavo. Aivawo mukuru mumauto ehushe hweRoma. Mugore 476 AD Odeacer akazviita mutungamiri wenyika yeItaly saka Roma yekumadokero yakabva yaparara. Aive mutongi aive nemukana mukuru asi aive nedambudziko guru rimwechete, aisatenda mutiriniti yeRoman Catholic. Rudzi rwake rwaive rwumwewo rwaive neumwe muonero pamusoro peaifanirwa kuitwa musoro pachinamato chechiKristu. Izvi zvaisagamuchirwa naPope. MaHeruli vaive vapikisi vaisatambirika pachitendero cheCatholic saka vaifanirwa kubviswa. Kutenda kutiriniti kwaive nheyo dzezvakavanzika zveBabironi. Zvaifanirwa kuchengetedzwa nenzira dzose dzavaigona nadzo. Zvakavanzika hazvaida mhinduro inonyatsonangana nechinangwa chazvo. Vaisimbirira pazvinhu zvisina maturo. Isu vanhu tinoda kuona mufananidzo wezvatinotenda mazviri. Saka mufananidzo usina maturo wakakosha pakutinyengedza. Saka vanhu vatatu mumwe nemumwe wavo ari mwari, havaiti kuti Mwari ave vatatu asi anoramba ari mumwechete, saka pfungwa dzevanhu dzinoramba dzichidzungaira pakati pekuti mumwechete nevatatu asi vasingakwanisi kuva nemuono wakatambanuka pachikamu ichi. Izvi zvakabva zvakosha pakupararira kwekusaziva, kunyanya kana vanhu vachitenda kumashoko akaita serekuti tiriniti asiri muBhaibheri. Mifananidzo isina maturo inobvisa vanhu pane zvinotaurwa neBhaibheri. "Mwari Mwanakomana" hazvizi muBhaibheri asi "Mwanakomana wa Mwari"
zviri muMagwaro. Nei? Zvine basa rei? Nekushaiwa maturo kwekupikisana kwemumwe nevatatu, hatichatofanirwi kubuda pachena. Chero kufungidzira kwatingaite kunenge kwakanaka. Riva rezvakavanzika zveBabironi rakatibata saka takanyengerwa kuti titi hatifanirwi kutsanangura zvose zvatinotenda tichizvitsigira neBhaibheri asi tinoramba tichizvinyepera nekutsigira zvatinotenda nemazwi asiri muBhaibheri.
Saka vapikisi vetiriniti ava vakazobviswa sei kuItaly kuitira kuti Pope asimuke pamasimba pasina kupikisa kwavo kwaisadikanwa. Mucharangarira Nebuchadinezzari negomba remoto? Akanga ari ndiye mukuru mukuru asingadi munhu anopikisana naye.
Mambo Zeno weConstantinople aive nepfungwa yakanaka. Theodoric aive ishe wemaOstrogoth aigara mumiganhu ye Italy neRoma yekumabvirazuva. Aigara achishungurudza Roma yekumabvirazuva zvakaita kuti azviite rema. Saka akabva azodaidza Theodoric kuti abvise maHeruli nekuuya kuzogara kuItaly uye kubva atora chigaro chehushe. MaOstrogoth vairwisa zvaityisa zvakaita kuti maHeruri adzingwe pakafa Odoacer mugore ra 493 AD. Nyanga imwechete yemaBabarian yakange yadzurwa. Asi paive pasina chakanaka sezvo vose, Theodoric nemaOstrogoth vaive vauyi uye vapikisi vetiriniti. Saka vaizobviswa sei kuitira kuti Italy inyatsove nyika inotenda kutiriniti zvakasununguka kubva kuvapikisi?
Muna 527 AD Justinian, uyo aitenda mutriniti zvikuru akava mutungamiri weConstantinople.
MaVandal, vaivewo vauyi vakagara kumusoro kweAfrica uko kwaiwanikwa chekudya neItaly. MaVandals vaive nevarwi vakawanda vaive vakanangana nekurwisa kumahombekombe egungwa saka vaibata nekurwisa uye kuba ngarava dzaifamba mugungwa reMediterranean. Justinian aida kuendesa mauto ake kunorwisa ltaly nengarava, saka asati adaro aida kunyatsova nechokwadi chekuti iye aikwanisa kuzogara kumusoro kweAfrica saka aizopamba kana kuparadza varwi vemaVandal vaive vari munhivi dzeMediterranean. Izvi ndizvo zvaifanirwa kuitwa nenyika dzemubatanidzwa muhondo yepasi rose yechipiri. Vasati varwisa Italy vaifanirwa kurwisa German yaive iri pasi paRommel kumusoro kweAfrica. Vadaro ndipo pega pavaizokwanisa kurwisa maGerimani aive muItaly, vachitangira kuzvigunwe zvekumakumbo vachikwira zvishoma nezvishoma.
Belisarius ndiye aive mukuru weuto akaita mbiri. Akaenda nengarava kubva kuConstantinople, raive guta guru rehushe hweRoma hwekumabvazuva, akasvika kumusoro kweAfrica mugore 533 akarwisa nekukunda maVandals muna 534. Kukunda kwekukasika uku kwaive kunyengera. Paakadzokera kuConstantinople maMoor ekumusoro kweAfrica akapandukirana saka kwemakore kwaive nehondo pakati pemadzishe akawanda. Pakazopera hondo iyi pakava nevanhu vashoma vakararama zvakaita kuti nyika idzi dzive nematongo mazhinji. Africa yekumusoro haina kuzoita zviri nani zvakaita kuti kuItaly nekuEurope kuve nenzara.
Asi mhinduro imwechete yaive yechokwadi, vauyi vemaVandal vaive vaparadzwa. Nyanga yechipiri yaive yadzurwa.
Izvi zvakasiya nzira kuna Belisarius, mugore 535 AD akabva aenda kuItaly yaitongwa nevauyi maOstrogoth akavarwisa.
Asi iyi yaive hondo huru yaikwanisa kutora makore makumi maviri. Hondo iyi yakakwidza nekudzika nenyika yeItaly. Roma yakapoteredzwa nemauto kuti ikande mafumo pasi kanokwana kashanu ikatorwa. Belisarius akadaidzwa kuti adzoke kuConstantinople kuzorwisa maPesians. Mambo Justinian aishandisa maGiriki vaipwanya vachitora zvinhu nekuparadza kurutivi irworwo rwenyika. Mumwe mukuru weuto aive ati chemberei Narses akazotumwa ku Italy akazokumbira rubatsiro kubva kumaBabarian emaLombard asati akunda maOstrogoths. Vashoma verudzi urwu vakanga vasara vakazobuda mu Italy nekuda kwavo. Italy yakazotarisana nedambudziko rezvirwere nenzara nerutivi rwenyika rwaive rwasaririra. Milani neRome zvakazosara zvave matongo. Kubvisa kwakaitwa maVandal nemaOstrogoths kwakaita kuti Italy ne Europe zvisvike muNguva yeRima "Dark ages".
Zvisinei, panguva iyo mukuru weuto Narses paakadzosera maLombards kwaaibva, vaive vambofara panguva shoma yavaive muItaly saka vaitoda kuzodzoka kuzozvitorera Italy kuti ive yavo.
Asi Nyanga yechitatu yaive yatobviswa kwaive kusisina vapikisi ve tiriniti muItaly.
MaBabarian vakanga vatoenda kuEurope nekumusoro kweAfrica. Vanhu vazhinji vakapa pfuma kukereke yeRoman Catholic kuitira kuti vasawire muruoko rwema Babarians (vanhu vemarudzi aive nehutsinye kwazvo). Pagore 600 AD kereke yakava nenyika huru kwazvo pachezvayo kumadokero. Kutonga kwaPope kwaive kwopararira. Kuzadziswa kwezvido zvevanhu kwakatanga kuendeka uye kufamba kwezvinhu mukereke kwakaitwa naPope kuti kuenderere mberi zvakanaka.
Makore gumi nematanhatu adarika mushure mekubviswa kwemaOstrogoths muItaly, rudzi rwemaLombard echipegani aive nehutsinye rwakapamba rwukatora zvikamu zvikuru zvenyika mu Italy mugore ra 568 AD kusanganisira Lombardy iriko nhasi uno kwavakazosarudza kugara. MaFranks akanga achigara muGaul inova France nhasi uno. Mugore ra 739 AD maLombard akapamba Roma akaitorera zvizhinji zvayaive nazvo. Saka nekupererwa Pope akaenda kuma Franks akanotaurirana navo. Pope aizogadza mambo wavo wavaizosarudza kumupa nyembe dzakakodzera. Iyowo Frank yaizobatsira kuchengetedza Roma kubva kumaLombard. Mambo weFrank Clovis akazokurudzirwa nemudzimai wake aive muBurgundian akapanduka kuva muCatholic. Mwanakomana wake Pepin akazodzinga maLombards kubva kuRoma kwekupedzisira muzukuru wake Pepin Charlemagne akazovapamba akavaita chikamu chehushe hwake.
Kutya maLombards kwakaita kuti Pope agume ari mumaoko emaFranks eCatholic. Kugadza mambo wemaFranks kwakaita kuti Pope agume ave kugadza mamwe madzimambo ese emuEurope Saka kutonga kwaPope kwakapararira nekuti vatungamiriri vemaBabarian vaida kugara vari kurutivi rwake kuti ivowo humambo hwavo husava panjodzi mumaziso evanhu nekuti vanenge vagadzwa naPope.
MaLombards akabata basa guru pakubvisa Pope kubva paruchengetedzo rwehushe hweRoma kuConstantinople nekuti atatange kutaurirana nemarudzi ane hutsinye emaFranks. MaFranks aigara kumusoro kweItaly ndivo vaive maBabarian ane simba kukunda mamwe marudzi emaBabarian ese.
Nerutsigiro rwavo hakuna mamwe marudzi aizoda kukanganisa Pope.
Mugore 800 AD Leo 111 akagadza Charlemagn semutungamiriri wehushe hweRoma hutsvene izvi zvakapa Pope kukudzwa kukuru zvakare nemvumo yekugadza vatungamiriri nemadzimambo.
Mamwewo marudzi akatanga kuda kuti Pope agadze madzimambo avo. Chinzvimbo chaPope chakatanga kuremekedzwa nebasa rake rakakura.
Pana 1130 AD Pope lnnocent 111 ndiye munhu aitonga muEurope.
Mari nekutengeserana zvakatanga kubva kunhivi dzeMediterranean zvichienda kumusoro nekumadokero kwe Europe nekuti maMoslem aive apamba kumusoro kweAfrica nenzvimbo huru dzeMiddle East pamakore a 700 AD. MaMonk vakatanga kupinda munyika dzemarudzi emaBabarian kumusoro nekumadokero kweEurope. Vainyanya kuita zvechiMonk vaive maCluny, vakavaka munyika yerudzi rwemaBurgundian. (Burgundy yanhasi uno). Kuita kwemaCluny kwakapararira zvakare sezvo vaive maCatholic vakava nekubudirira kukuru. MaMonk matsva akawana kuremekedzwa nekuti akaita Pope mutungamiri wavo mbiri yaPope yakaramba ichisimuka nekuda kwemaMonks aya nekuti akapararira akatanga kushandura maBabarian echipegani kuti vave maCatholic.
Mapegani eAnglo-Saxon akapinda muEngland kuti vaipambe vawane kugaramo vakadzingira maKristu aive asiri ma Catholic kumadokero vachinogara kuWales. MaAnglo-Saxons vakatambira kuve maCatholic kumakore a 600 AD. Vakaisa maMonk aipikisa maMonk emaIrish aive aiswa naColumba aigara kuchitsuva cheIona pedyo neScotland. Vaishandisa ruremekedzo rwemapegani rwavaipa Saint Peter semubati wesuwo reDenga, maMonks echiCatholic akawana rubatsiro kubva kuvatungamiri vemarudzi emaBabarian vakakwanisa kudzikisira basa rese rakaitwa nemaMonks aColumba.
Saka maBurgundians nemaAnglo-Saxon akatarisisa hupikisi hwe mamwe maMonks vakabva vaparadzira kutonga nesimba raPope kumusoro nekumadokero kwe Europe.
Kumadokero kweEurope kwaigara maVisigoths munyika ye Spain uye maSuevi munyika ye Portugal. Dzinza ravo chairo raive maArian asi ndivo vakava maBabarian vekutanga kuva maCatholic. MaArab nemaMoors ekumusoro kweAfrica akapamba Spain nePortugal asi kwakasara vamwe vemarudzi emaVisigoths nemaSuevi vakazobatana vakarwisa kwemakore vakakunda maArabs nemaMoors. Panguva yaive ichigara maMoslem muSpain nemaVisigoth nemaSuevi vakaona zvichibatsira kuve maCatholic sezvo zvaivawanisa rubatsiro kubva kumaCatholic munyika yeFrance zvakare nerubatsiro rwa Pope. Saka kumashure kwekuenda kwaColumbus kuAmerican muna 1492 nengarava. VekuSpain vakaendawo kumadokero nechikepe, maPutukezi vakaendawo kumabvazuva vakavhura nzira dzekutengeserana dzepasi rose. Vakapamba nyika dzeIncas neAztec muAmerica. Saka Spain nePortugal dzakabva dzavhurira pasi rose kumaitiro eRoman Catholic saka hutongi hwaPope hwakabva hwapararira pasi rese.
Marudzi gumi emaBabarian akanga apedza basa rawo rekuputsa hushe hweRoma asi vakazokundawo pasi rose mukubatsira pakusimuka kwekereke yeRoman Catholic church ikava iine kurudziro yaitova nesimba muItaly, muEurope, kumhiri kwemakungwa zvikabva zvava pasi rose.
Danieri 7:8 Ndikacherekedza nyanga, ndikaona rumwe runyanga ruchibuda pakati pedzimwe, ruri ruduku, dzimwe nyanga nhatu pane dzokutanga dzikadzurwa nemidzi yadzo pamberi parwo, ndikaona kuti parunyanga urwu pakanga pari nameso omunhu, nomuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru.
Meso emunhu. Maonero anoitwa zvinhu navanhu. Tine rudo rwesimba nerudo rwehupfumi. Masimba enyika ino nekubudirira ndizvo zvatinoti zvakakosha.
Pope Gregory V11 (1073-1085) vakataura mashoko anotevera.
Pope haakwanisi kutongerwa nani zvake panyika pano.
Kereke yeRoma haisati yamborasika kana kuresva. Vakaiswa pasi peshamhu vemuCatholic vanotyora nekupikisa zvinodiwa mukereke, vakafanirwa nekurwadziswa uye kupiswa kusvika vafa.
Pope ave pachinhanho chakafanana necheMwanakomana waMwari.
Pope Urban II mugore 1095 akaita kurusedi yekutanga achivimbisa ruponeso kune avo vaizoenda kuPalestine kunouraya maMoslem. Jerusalem yakasangana nekuuraiwa kunorwadza kwemaMoslem vaigara ikoko.
Pope Innocent III (1190-1216) akati Pope ndiye aitonga Jesu saka aizomira panzvimbo ya Jesu. Kurusedhi yaPope yechina mugore ra 1204 vakarwisa kuConstantinople nekuvatorera zvakakosha nechisimba izvi vakazviita kumaKristu pachinzvimbo chekurwisa Jerusarema nekutora kubva kumaMoslem.
Muna 1209 akaita kurusedhi akanangana nemaKristu aisava maCatholic maAlbigensian vekuzasi KweFrance kuuraiwa kwevanhu kwakaomarara kwakazoramba kuchiitwa kwemakore makumi maviri akazotevera.
Mugore ra 1302 Pope Boniface V II akati hakuna kupona kunze kwekereke ye Roman Catholic. Unokwanisa kuenda kudenga kana uri munhu anotevera Pope chete.
Pope Status IV (1471 -1484). Pope uyu aibhadharisa mutero kuvanhu vemu Roma zvaimuitira 30 000 ducats pagore. Aitengesa kugarika kwevafi. Aiti bhadharai nhasi hama dzenyu dzakafa dzinozobuda mukutambudzika. Minamato haingakuyamurei asi mari yenyu.
Muna 1478 akakomborera vanhu vekuSpain akavaisa panzira yehusungwa kurwadziswa uye akapisa vanhu vapenyu vainzi vapikisi uye vaifungidzirwa kuti vaipikisa vaive maCatholic kurwadza kwaiita kuurawa kwaiitwa vanhu nekuda kwechitendero kwaifanana nekwematumba aHitler ekuuraya vanhu.
Pope Alexander VI (1492-1503) akabva agovanisa pfuma nenhapwa pakati peSpain nePortugal zvaitarisirwa nenyika itsva dzemhiri kwemakungwa.
Pope Pius V (1556-1562) akapinda misangano yese yekubvunziridzwa nekutsvagwa kwemhosva pavanhu venyika yeRoma. Pashure pezvo akazoenda kunzvimbo yekurwadzisira vanhu kwaakatongera rufu vose avo vaive vaonekwa vari nemhosva dzekupikisa chitendero chavo nekuti vaive vapanduki. Akatumira mauto ake echipope kunobatsira mutungamiri weFrance muhondo yezvitendero yaive kunyika kwake yainangana nevaisada kuva maCatholic. Vakarairwa kuti vauraye vasungwa vose vemaHuguenot.
Muna 1572 apo maHuguenot 3000 akauraiwa kuParis pahusiku hwainzi hwaSt Batholomew. Pope Gregory XIII vakapemberera kuuraiwa kwevanhu uku kupfurikidza kutungamirira "Te Deums" muRome.
Mufaro wake wakawedzera svondo rakazotevera racho apo kuurayana kwakazopararira France yose zvekuti kwakazouraiwa vanhu vaisvika 50 000 maHuguenot varume, vakadzi nevana vakanga vafa panguva iyoyo.
Pope Gregory XIII aive nesimba rekushandura karenda rinenge risisafambirane nemamiriro ekunze nekubvisa mazuva gumi kubva pakarenda raGumiguru muna 1582. Nyika zhinji nanhasi dzichiri kutevera karenda iri rinova chapupu kusimba raPope mumaziso evanhu panyika.
MuJesuit, Pope Leo XIII (1878-1903) akati "Ruvengo kune avo vose vanoti: Mweya Mutsvene haudi kuti tiuraye
vapikisi vechitendero chedu".
Izvi ndezvimwe zvezvakataurwa nekuitwa nanaPope panhorondo yavo.
Kutaura uku hakutaridzi rudo rwavo rwepfuma uye simba. Mweya uri kuseri kwekutaura uku hautoenderani kana kutaridza Mweya wehuKristu.
Saka mweyai wazvinoratidza?
Danieri 7:9 Ndikaramba ndakatarisa kusvikira zvigaro zvehushe zvagadzwa'po, mumwe akakwegura pamazuva ake akagara'po, nguvo yake yakanga yakachena sechando, uye vhudzi remusoro wake rakanga rakaita semakushe akanatswa chigaro chake cheushe yakanga iri mirazvo yemoto, makumbo acho wakanga uri moto unopfuta.
Chiono ichi chakabva chashanduka kuva zuva rekutongwa. Zvigaro zvedu zvevanhu zvehushe nezvevatongi apo mitongo yakatemwa zvakanangana nemirawo yenyama, zvichakandirwa pasi. Kana Mwari akutonga, mutongo wake uchava maererano neBhaibheri. Achapfeka nguwani chena kunge yemutoni. Nguwani yemutongi inomiririra kuzviwisira kwake pakuita zvinodiwa pamurawo wenyika. Asi uyu mutongi achava akamiririra kutonga maererano neShoko remuBhaibheri, Shoko raMwari.
Danieri akaona kusimuka kwekereke yeRoman Catholic, chaakazoona chaitevera izuva rekutongwa.
Izvi zinoreva kuti Roman Catholic church nezvigadzirwa zvayo, chiKristu chemasangano kumakereke akabuda muCatholic chichatsvairwa kuenda kuzuva raMwari rekupedzisira rekutongwa kweumwe neumwe.
Danieri 7:10 Rwizi rwemoto rwakange rwuchibuda rwuchibva pamberi pake, zuva nezuva zvakanga zvichimubatira uye pamberi pake pakange pamire zvuru zvine gumi zvezvuru zvine gumi. Kutongwa kukatanga, bhuku dzikazarurwa.
Kereke yechokwadi, mwenga waKristu, vachange vari naye pazuva rekutongwa. Mwenga anobatira murume wake anova musoro wemwenga. Asi vatendi vechokwadi vashoma mumwe pazana! Chokwadi chaMwari chinorambwa nevakawanda. Saka pakupedzisira vanhu havangaregererwi. Zvose zvavakaita zvakaipa kana zvavakatenda zvisirizvo zvichavaroverera pazuva rekutongwa.
Danieri 7:16 Ndikaswedera kune mumwe akanga amire'po ndikamubvunza kududzirwa kwazvokwadi kwezvinhu izvi zvose, akandiudza akandizivisa kududzirwa kwazvo izvo
17 Mhuka idzi huru, idzo ina, ndiwo madzimambo mana achamuka panyika
18 Asi vatsvene vekumusoro soro vachapiwa hushe, hushe huchava hwavo nokusingaperi peri.
Nyika ichava nemadzimambo ayo ane hutsinye uye ane huwori. Asi izvi zvichavapo kwenguva diki diki. Kwekupedzisira, Makristu akazvarwa patsva akararama maererano neBhaibheri ndivo vachagara nhaka kudenga. Nhasi uno hutongi hune mbiri, hunoteverwa nevazhinji, asi ramagwana vakarambwa vakatukwa ndivo vachatonga.
Vakarurama vachatonga nyika.
Danieri 7:19 Ipapo ndakada kuziva kududzirwa kwazvokwadi, kwemhuka yechina yakasiyana nedzimwe dzose yakanga ichityisa zvikuru yakanga ina meso ovutare, nzara dzayo dziri dzendarira, iyo, yakanga yapedza nokuputsanya nokupwanya zvakasara netsoka dzayo.
Uhu hwaive hushe hweRoma hwakanga hwapamba Europe yekumadokero. Danieri haana kutarisa Roma yekumabvazuva. Zvakavanzika zveBabironi zvakaenda kumadokero kwete kumabvazuva.
Danieri 7:20 Vuye pamusoro penyanga dzine gumi dzakanga dziri pamusoro wayo, nerumwe runyanga rwakazobuda dzimwe nyanga nhatu dzikaparadzwa pamberi parwo, irwo runyanga rwakanga rwunameso, nemuromo waitaura zvinhu zvikuru, rwakanga rwakapfuura shamwari dzarwo pakukura.
Chikara ichi chaingove nemusoro mumwechete.
Saka hachisiri chikara chimwe nechakaonekwa naJohane kuna Zvakazarurwa 13 na 17.
Chikara ichi chaive nemisoro minomwe. Chikara chakaonekwa naDanieri chaimiririra hushe hweRoma yechipegani. Chikara chakaonekwa naJohane chaive kereke yeRoman Catholic iyo yakagara pazvikomo zvinomwe zvekuRoma. Amai, mhombwe vevanasikana vose Masangano akapanduka akabuda munaamai vawo Roma.
Nyanga duku yeRoman Catholic yakazova yakasimba kupinda mamwe marudzi ose emaBabarian.
MaBabarian akazoita achipera nekubudirira kwakatanga kuita nyika muEurope. Kutyisidzira kwaNapoleon kwakapararira kukanosagana nekwakaparadzirwa na Attila muHun muhushe hwese hwenyika yeRoma. Kufadza Napoleon vanhu vakabatana kuita mhuri imwechete. Saka paakabva Europe yakava nyika ine marudzi akabatana zvokuti kuti kwaimbova nemaBabarian yakazongova nhoroondo. Napoleon akaisa Pope muhusungwa mushure akazoendeswa kukanzvimbo kadiki kaaizogara asingafanirwi kubvako muna 1870 pakawana Italy rusununguko. Saka apa zvakabva zvaitawo sekuti nekereke yeCatholic yakanga yapararawo. Asi mweya weRome wairarama. Mugore ra 1929 Musssolin mudzvanyiriri wekuItaly, akaona kanyika keVatican senyika yakazvimiririra, kanyika kadukuduku pasi rose. Nyanga duku yaDanieri. Panguva iyo Pope akange asiya kupamba nyika achizviunganidzira, akabva azomuka ari nesimba kwazvo semutungamiriri wekereke ine simba uye ari nesimba pane zvemari. Apa kereke yeCatholic yakanga yozivikanwa pasi rose nesimba mune zvemweya zvakare mune zvemari. Marudzi emaBabarian hapasisina asi kereke yeRoman Catholic icharamba iripo.
Danieri 7:21 Ndakatarira ndikaona runyanga urwu rwuchirwa navatsvene, nokuvakunda.
kumakore a 400 AD Bishopu wekereke yeRoman catholic Augustine akati zvaive zvakanaka kuti vapikisi vechitendero chavo vauraiwe. Ava vanhu vaisatenderana naPope. Vamwe venhoroondo vaiti Augustine aive muchinda wekuuraya.
Kunana 450 AD Leo I akati zvakataurwa naAugustine zvaireva kuti unokwanisa kuuraya vapikisi vechitendero chako.
Saka muchina wekuuraya wakabva watanga. Kupfuura makore 1000 munguva yerima (Dark Ages) Catholic yakasarudza kupikisana nezvaiitwa naLuther.
Kwekupedzisira vanhu vaisvika 68 miriyoni vakauraiwa nekuti vaipikisa kereke yeRoman Catholic. Mune dzimwe nzvimbo sekuchamhembe kweFrance maAlbigensians vakauraiwa vese. Madzibaba emaPilgrim nemaHuguenot akatozotizira mhiri kwemakungwa.
Danieri 7:22 Kusvikira wakakwegura pamazuva ake achisvika, vatsvene voWokumusoro-soro vakaruramisirwa, nguva ikasvika yokuti vatsvene vapihwe vushe.
Pakupedzisira Mwari achagadzirisa zvose. Kutadza kungabudirira pasi pano asi vatsvene vakafanirwa kutsungirira. Pakuguma Mwari vachaita kuda kwavo. Tinofanirwa kuramba tichitenda.
Danieri 7:23 Akati mhuka yechina uchava vushe hwechina panyika, vuchasiyana novumwe vushe hwose, vuchapedza nyika yose nokuvupwanya, nokuvuputsanya.
Chitendero chemasangano eRoman Catholic nevakabva pairi vanasikana vayo chichatora nyika. Vatendi vanopikisa kuita uku vachatsikirirwa vomwararika sezvo vachaputsirwa kuva zvikamu zviduku. Ivhu mutsoka dzemufananidzo waDanieri Chitendero chechokwadi, ivhu retsoka dzemufananidzo waDanieri rakaputsika .lvhu rinomiririra vatendi vechokwadi. Dare rinomiririra kereke yeRoman Catholic. Chingwa chakagurwa muzvikamu pachirairo chokutanga. Chingwa chinomiririra muviri waKristu, kereke.
Danieri 7:24 Kana dziri nyanga dzine gumi paushe uhu pachamuka madzimambo ane gumi, asi mumwezve achamuka shure kwavo, iye uchasiyana nevamwe vokutanga uchakunda madzimambo matatu.
Kuitira kuti Pope atonge Italy, pasina vapikisi vechitendero cheTiriniti marudzi matatu emaArian maHeruli, maVandal nemaOstrogoths vaifanirwa kubviswa. Izvozvo zvapera kwaive kusisina vaipikisa kudzidziswa kweTiriniti mumakore ana 900 munguva yerima. Saka triniti yakatambirwa sechokwadi nekusaziva. Kunyangwe nanhasi vanhu havadi kunzwa munhu anopikisa tiriniti.
Chipope chakasiyana nemamwe marudzi. Vaida nyika yeRoma. Asi Pope pekupedzisira akazovharirwa mukanyika keVatican, haana kuzoda zvenyika kana kuzviunganidzira nzvimbo asi akabva ava mutongi pasi rose semutungamiri wekereke huru pasi rose, apo aikudza hushe hwake hwemweya. Semutungamiri pamweya wevanhu vanodarika biriyoni akava nesimba guru mune zvematongerwo enyika uye zvechitendero. Anoita chikamu chikuru panyaya dzenyika pasi rose nekuda kwekukudzwa nesimba rake. Ikozvino hushe hwake huri kurwira moyo nepfungwa dzevanhu saka nekushandisa nzira dzemweya akabva ava nekubudirira kukuru panzira yake yekunotonga pasi rose.
Danieri 7:25 Uchataura mashoko ekumhura wekumusoro-soro uchaparadza vatsvene uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirairo, ivo vachaiswa mumaoko ake kusvika nguva imwe nedzimwe nguva, nehafu yenguva.
"Vanotaura mazwi makuru ekumhura Mwari wekuMusoro". Zvishoma zvinotaurwa naPope zvinobva muBhaibheri.
Muenzaniso wakanaka kutenga ruponeso apo vainzi vaizoregererwa zvivi kana vabhadhara mari. Ropa raJesu ndiro rega rinoripira zvivi kana tichinge tasiya zvivi uye tamugamuchira saIshe neMuponesi wedu.
Pope anokurudzira vanhu kunoita makurusedhi vachinouraya maMoslem kuti vawane kupona. Hachisi chiKristu.
Umwe muenzaniso akaita Mwari tiriniti, kumutorera zita rake. Hakuna zita rimwechete revanhu vatatu. Saka maKristu arikunyengedzwa kuti zvinzvimbo zvitatu Baba, Mwanakomana naMudzimu Unoera mazita aMwari. Saka maKristu haachatoziva kuti mwari wavo anonzani.
Nhasi uno rubhabhatidzo rwemvura rwuri kuitwa nenzira zhinji. Nzira huru isingagamuchiriki ndeyemuzita Rashe wedu Jesu Kristu nekuti izvi zvinopikisa tiriniti yekuisa vanhu vatatu pachinzvimbo chaMwari. Asi iyi ndiyo nzira yakashandiswa naPetro kuna Mabasa Avapositora 2 vs 38. Sezvinei maCatholic anotora Petro saPope wavo wekutanga akakosha. Asi havateereri zvaanovaudza.
Pope anoti tinokwanisa chete kuenda kudenga kana tichitevera iye, izvi zvose zvichipikisa zvakataurwa naJesu kuti ndiye Nzira zvakare Suwo rekupinda kudenga.
"Bvisai vatsvene vose". Pope Leo I akatanga kuuraya vose vakanga vasiri maCatholic muna 450 AD.
Vanhu vaisvika 68 miriyoni vakaurayiwa panguva yerima neimwe nguva yakazotevera. MaKristu ose matsvene akauraiwa. Vazhinji zvaivamanikidza kutizira mhiri kwemakungwa kunotsvaga kurarama. Zvino kwakazotevera nguva refu yebvunziridzo vanhu vachizotongwa pamagumo votouraiwa kunyanya bvunziridzo dzekuSpain. Michina yekuuraya iyi inotifungisa magungano ekuuraya akaitwa naHitler kuPoland, Stalin kuRussia kozoti Mao kuChina mu 20th centuri. Kereke yechokwadi yakasangana nenguva yakaoma kubva kukuuraiwa nekurwadziswa nekuita kwekereke yeRoman Catholic.
"Kushandura nguva". Karenda redu rakashandurwa kuRoma. Muna 46 BC Julius Caesari akawedzera mazuva 90 pakarenda kuti rifambirane nemwaka wemamiriro ekunze. Mazuva 23 akawedzerwa muna Kukadzi akawedzera mamwe 67 pakati paMbudzi naZvita. Gore ra 46 BC rakava gore rekukanganisika sekuti gore iroro rakava nemazuva 445.
Ndiye akaisa leap year. Achiwedzera rimwe zuva pamakore mana egaega.
Iri raive Jurian karenda reRoma.
Asi pamakore 128 ega-ega pakatanga kubva zuva rimwechete pakufambirana nemwaka.
Muna 1582 Pope Gregory XIII akashandura karenda nekubvisa mazuva gumi munaGumiguru kuti zvifambirane nemwaka. Akaisa pfungwa yekuti pasave neLeap year pacentury yega-yega kunze kwekunge tichikwanisa kuigovanisa na 400 zvisingasiye chero chiro kunze. Saka 1900 yaive isiri Leap year asi 2000 yaive Leap year.
Iri rainzi Gregorian karenda reRoman Catholic.
Pope ndiye akashandura nguva dzeChirairo (Communion) dzavanodaidza Kuti "Mass" kubva pahusiku (last supper) nguva dzavanoti dzinorema kuita izvi, kuenda pamangwanani apo vanoti ndidzo nguva dzisingaremi kuita zvinhu. Vakapanduka vakabuda mairi (Roman Catholic) vemasangano vakateedzera muenzaniso wakaitwa neRoma wekupemberera "Lord's breakfast" Chirairo chemangwanani pachinzvimbo chechirairo chemanheru "Lord's Supper".
Pope akashandura Sabata kubva paMugovera kuenda paSvondo. Nevanasikana vayo vakabuda mairi vakatevedzerawo kuita svondo Sabata.
Asi izvi zvose kutadza.
Kuenda kukereke Svondo hakuna kuipa nekuti kereke yekutanga yakazviita. Zvakanaka kuenda kunodzidza Bhaibheri neSvondo. Asi izvi hazviiti kuti svondo ive Sabata.
Sabata zvinoreva kuti kuzorora. Zororo rechokwadi kuzorora kubva kuzvivi zvedu. Asi izvi hazviitike kana tisina kugamuchira rubhabhatidzo rwemweya mutsvene, apo Jesu anenge ogara matiri achidzora hupenyu hwedu. Apa pega ndipo patinenge tasunungurwa kuzvivi zvedu Hatizodzokerazve kunzira dzezvivi dzataifamba muhupenyu hwedu. Nenzira imwechete iyi Mwari akasika Denga nenyika akazorora nezuva rechinomwe haana kuzodzokerazve pamabasa ekusika nekuti aive apedza kusika. Kana Mugovera riri zuva rekuzorora kana kuti Sabata unoshanda, wozorora nemugovera wodzokera kunoshanda zvakare. Izvi handizvo zvakaitwa naMwari.
Svondo izuva rekurumbidza Mwari. Sabata redu harisi Svondo. Izuva ratakagamuchira rubhabhatidzo rweMweya Mutsvene saka kuzorora kuzvivi zvedu. Hatizodzokere kunzira dzedu dzekare dzekunwa, kusvuta, kutamba njuga nezvimwe zvakadaro.
Zvishoma zvinoitwa nekereke yeRoman Catholic zvinotevera Bhaibheri. Vakabva vaisa shanduko zhinji dzisiri mubhaibheri. Vakagadzira nzvimbo mupfungwa dzavo yavanoti inonogara mweya wako kana wafa wakamirira kuti umwe abhadharire mweya wako kuti uwane ruponeso.
Vane chingwa chakaita denderedzwa chavanopa vanhu asi vanhu havapihwi waini pachirairo chavo (communion) "Mass".
Vanotenda kuti chingwa ichi ndiwo muviri washe chaiwo newaini ndiro ropa raIshe chairo.
Vanotenda kuti unofanira kuzvipira kuna Pope kuti uwane ruponeso.
Unofanirwa kureurura kumuprista kuti uregererwe.
Makereke avo azere mifananidzo nezviumbwa.
Maprista (Fata) haatenderwe kuroora.
Vakawedzera mamwe mabhuku muBhaibheri Apocrapha.
Vakagadzira zvigaro vakazvipa mazita asimo muBhaibheri akaita seekuti archbishop, maKadhinari naPope kuti vafambise basa mukereke.
Mitemo isiri muBhaibheri inonzi nevakuru vekereke yeRoma titevere yakawandisa zvakare inoramba ichiwedzera.
Danieri 7:25 Uchataura mashoko okumhura wokumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirairo ivo vachaiswa mumaoko ake kusvika nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva.
Uyu mutsara wakaoma "nguva" inokwanisa kuva ichireva gore. "dzimwe nguva " dzinokwanisa kuva makore maviri. Kupatsanura "nguva" kunova hafu yegore.
Kana kutsanangura uku kuri kwechokwadi tikasanganisa tinobuda nemakore matatu nehafu yegore, uku ndiko kukura kuchava kwakaita nguva yekutambudzika nekurwadziwa yakanyorwa ichinzi mwedzi 42 kana kuti mazuva 1260.
Zvakazarurwa 11:2 Asi siya ruvazhe rwuri kunze kwetemberi, usaruyera nokuti rwakapiwa vahedheni vachatsika guta dzvene mumwedzi ina makumi mana nemiviri.
3 Ndicharaira zvapupu zvangu zviviri kuti zviporofite, zvakapfeka masaga mazuva ane churu chinamazana maviri namakumi matanhatu.
"Score" zvinoreva makumi maviri 20.
Saka chikara chekuRoma chicharoverera vatsvene kusvikira makore matatu nehafu ekutambudzika atanga. Zvino vatsvene vachaendeswa kudenga paKuuya kweChipiri kwaJesu. Nguva yekutambudzika isati yatanga.
Gwaro iri rinokwanisa kufananidzwa naDanieri chaputa 9.
Izvi zvinotisvitsa pakuti kereke ichava yakasunungurwa kubva paruoko rwaantikristu panguva yeKuuya kweChipiri kwaJesu. Asizve zvinotipa muono wakadzama.
Danieri 9:24 Vhiki dzinamakuni manomwe dzakatemerwa vanhu vako neguta rako dzvene, kupedzisira kudarika nekugumisira zvivi, nokuyananisa zvakaipa nokuvuyisa kururama kusingaperi, nokusimbisa zvakaratidzwa novuprofita nokuzodza nzvimbo tsvene-tsvene.
25 Naizvozvo chiziva unzwisise, kuti kubva pakutemwa kwemurairo wokuvandudza nokuvaka Jerusarema kusvikira kune wakazodzwa, iye muchinda, zvichaita vhiki nomwe uye vhiki dzinamakumi matanhatu nembiri dzichavapo dzokuvakwa kwaro, rinenzvimbo mhamhi nemigero, asi zvichaitwa nenguva yekutambudzika.
Murairo wekuvakazve rusvingo rweJerusarema wakapiwa muna 445 BC kuna Nehemiah (kumazuva iwayo nzvimbo dzaisaonekwa semaguta kana dzisina rusvingo).
Parubhabhatidzo rwake rwemvura, urwo rwaive kugezesa gwayana rechibairo, Jesu akanongedzwa naJohani Mubhabhatidzi seMwanakomana waMwari, pakanzwa Johani Mweya Mutsvene uchitaura uchiti "Uyu ndiye Mwanakomana wangu unodikanwa" Mweya Mutsvene wakabva wazorora paari ukamuzodza pamberi peruzhinji, Muzodziwa, Muponesi. Mwanakomana wamambo wekudenga ndiye Muchinda chaiye lzvi zvakaitika apo Jesu aive ave kumakore makumi matatu, saka izvi zvinogona kuva kumakore a 30 AD pakarenda redu.
Zviitiko zvenguva izvi zvingangodaro zviri zvemacenturi angangoite mashanu kupeta nguva ruviri. Kutora zuva segore. Zvinomiririra zviitiko zvenguva zvemasvondo manomwe (7) saka toti mazuva 7 x 7 tinobuda nemazuva 49. Kana zuva riri gore saka zvinoreva kuti maJuda aive achiri nemakore 49 apo mwari aive achiri kutaura navo kupfurukidza nevazodziwa Nehemiah naMalachi maporofita maviri ekupedzisira.
Izvi zvaikwanisa kuvasvitsa kumakore a 400 BC ayo venhoroondo vanotsanangura vachiti "nguva yerunyararo" apo kwemakore aikwanisa kusvika ku 400 Mwari aive anyerere haana kubvira avatumira muprofita kana mutungamiri akazodzwa kuzotungamirira maJuda. Threescore zvinoreva kuti (three times twenty). Saka kumasvondo anoita 62 toti mazuva 62 x 7 tinowana mazuva 434 kana makore 434. Saka maJuda aive nenguva shoma ("nguva" inotsanangurwa semasvondo 7muchiprofita). Nehutungamiriri hweMweya Mutsvene kana vanhu vakazodzwa nenguva yakati rebeyi .
("Nguva"yakaiswa pamasvondo 62 mune zvakaprofitwa) apo maJuda akasiiwa achiita kuda kwavo.
Saka pakabhabhatidzwa Jesu vakanga vashandisa 7 + 62 anova masvondo 69 emasvondo 70 akanga aprofitwa.
MaJuda aive asarirwa (nemasvondo 7 kana makore 7) Mereniyamu isati yaiswa kuti vatonge nyika.
Danieri 9:26 Zvino kana vhiki idzo dzinemakumi matanhatu nembiri dzapera, wakazodzwa uchabviswa, akasara asine chiro, vanhu vemuchinda, unozouya vachaparadza guta nenzvimbo tsvene, asi kuguma kwazvo kuchauya nokukukurwa, kurwa kuchavapo nokuparadzwa kwakatemwa kusvikira pakuguma.
Wakazodzwa akauya akarovererwa akashumira kwemakore matatu nehafu. Saka svondo rekupedzisira rakapatsanurwa napakati. Jesu akaita hafu yekutanga navo akabva abva kwavari achienda kumahedheni kwemakore 2 000 munguva yatinodaidza kuti nguva yemakereke manomwe (7church ages). Pakupera kwemakereke manomwe ndipo pane Kuuya Kwake kweChipiri. Apo anotora kereke yake yechokwadi oenda nayo kudenga. Apa ndipo panobva patanga hushumiri hwaMoses naHerija vachitungamirira maJuda mukati memakore matatu nehafu panguva yekutambudzika, inova hafu yesvondo risina kuzopedziswa nema Juda.
Saka makereke manomwe aripo "pakupatsanura nguva". Zviitiko zvenguva pakati pehafu yekutanga yesvondo rechi 70 (hushumiri hwaJesu) nehafu yekupedzisira hushumiri hwaMoses naHerija. Nguva yemakereke manomwe inopatsanura svondo remaJuda rekupedzisira muzvikamu zviviri zvakaenzana nguva dzemakereke dzozadzisa mukana uri pakati pemahafu maviri esvondo iri.
Saka makereke emasangano ane kurudziro yeRoman Catholic achazvidza nekumhura kereke yechokwadi kusvikira "pakupatsanurwa kwenguva" (nguva yemakereke manomwe) yapera. Zvino maporofita maviri anobva auya nguva yekutambudzika yobva yatanga inova makore matatu nehafu kune avo vose vanenge vasiiwa naJesu.
Vanhu vemuchinda achauya vachaparadza guta nenzvimbo tsvene.
Muchinda wewakaipa antikristu achauya otonga munguva yekutambudzika. Vanhu vake vakaparadza guta reJerusarema vakaparadzazve nzvimbo tsvene (Temberi yaSoromoni). Temberi yakaparadzwa mugore ra 70 AD nemukuru wemauto weRoma ainzi Titus. Kana ava vari ndivo vanhu vewakaipa, saka wakaipa (antikristu) achauya achabva kuRoma.
Mugore 135 AD mutungamiri weRoma ainzi Hadrian akaparadza varwi vemaJuda veBa-Kokhba, akarima Jerusarema nejoki remadhonza emombe. Zvose guta nenzvimbo tsvene zvaive zvaparadzwa nemaRoma.
Danieri 7:27 Ipapo vushe nesimba novukuru hwose pasi pedenga rose, zvichapiwa vanhu vavatsvene voWokumusoro-soro vushe hwake ndohwokusingaperi, masimba ose achamushumira nokumuteerera.
"Achazadzisa sungano kuvazhinji pasvondo rimwechete".
Izvi hazvirevi kuita sungano asi kuzadzisa sungano yakanga yaitwa kare.
Uyu arikurehwa ndiMwari, kwete Satani.
Mwari akazadzisa sungano yaakaita naAbrahama, naJesu.
sungano inoitwa isati yavekuzadziswa.
1 Makoronike 16:16 Iyo sungano yaakaita naAbrahama nemhiko yake kuna Isaka.
Vagaratiya 3:17 Zvino ndinoreva chinhu ichi ndichiti sungano yakasimbiswa kare naMwari haitorerwi Simba rayo nemurairo wakazotevera makore mazana mana namakumi matatu apfuura, kuti chipikirwa chikoneswe.
Mwari akaita sungano naAbrahama akazadzisa sungano iyoyo muhupenyu, rufu nekumuka kuvakafa kwa Jesu Kristu. Hapana gwaro rinoti Satani (antikristu) achaita sungano nemaJuda ozozadzisa sungano iyi. Satani nekuipa kwake, anotoputsa sungano, kwete kuzadzisa.
"Pakati pevhiki achaita kuti zvipiriso nezvipo zvibviswe, nekupararira kwezvinonyangadza achazviita kuti zvive zvakarasika , chero kusvikira pakuparadzwa".
Uyu ari kurehwa (ndiantikristu) mweya wakaipa unenge uchishanda ipapo ipapo panzvimbo paunenge uri Pontius Pilate, gavhena weRoma, akapa mvumo yekuroverera Jesu Kristu.
Pakurovererwa kwaJesu Kristu, mumashure memakore matatu nehafu ehushumiri, chidzitiro chemutemberi chakabvaruka apo Mwari akabuda mutemberi. nzvimbo tsvene ndipo pakaperawo chinamato chemutemberi. Hwayana dzavakazopira dzaive dzisisina zvadzaireva sezvo Gwaiana raMwari rakaita chipiro chimwechete chezvivi zvenguva dzose.
Asi wakaipa akanga asati apedza kukurudzira kurasika kweRoma. Muna 135 AD Hadrian mutungamiriri weRoma akazopedzisa kuparadza Jerusarema.
Vakabvisa marudzi matatu aisatenda tiriniti kuti vagadze Pope semutungamiri wekereke yeRoman Catholic zvakaita kuti Italy nekumusoro Kweafrica kusare ave matongo kwaane vagari vashoma vanotambudzika pamakore ari pakati pe 533 ne 552 AD. Izvi zvakazopararira kuEurope kuzadzisa Nguva yeRima (Dark Ages).
1929 Musolin akaita Roman Catholic Vatican kuti ive nyika yakazvimiririra. Gore rimwechete iroro pasi rose rakatarisana nekudonha kwemari dzenyika, nyika dzikatarisana nekushupika kukuru.
Nhasi uno mweya wakaipa wechichechi-chechi wakapararira kubva muRoma uchipinda mumakereke eMasangano saka apo vanhu vanosiya zvinodiwa neBhaibheri vachitevera tsika dzechechi nezvidzidziso zvayo, kutenda kwechokwadi kunobva kwarasikawo.
Kutenda kunobva chete mukutevera Bhaibheri.
Danieri 7:26 Asi kutonga kuchatanga, vachabvisa simba rake, kuti varipedze nekuriparadza kusvikira pakuguma.
Kukanganisa kwezvitendero hakungararami kwenguva refu. Kwekupedzisira vachazvipindurira kuzvivi zvavo.
Danieri 7:27 Ipapo vushe nesimba noukuru hwovushe hwose pasi pedenga rose zvichapiwa vanhu vavatsvene, voWokumusoro-soro vushe hwake ndohwonokusingaperi masimba ose achamushumira nokumuterera.
Tinobatira Mwari nekutendeka paShoko rake kwete kutsika dzekereke, zvisinei nembiri kana kutambirika kwadzo.